I-china Electric hammer, chisel electric chisel, i-SDS, i-Max, i-Hex, i-chisel ekhombe, i-chisel eyisicaba, imbobo emine kanye ne-pit pit hexagonal chisel, ifemu ye-pneumatic chisel nefektri abakhiqizi | Boda
Isando sikagesi, isisel kagesi esalungiswa ngogesi, i-SDS, iMax, i-Hex, i-chisel ekhonjiwe, ishizolo eliyisicaba, umgodi omane kanye nesisi somgodi onamacala ayisihlanu, isisisi somoya
Ama-chisel asetshenziswa kakhulu endaweni yokwakha, amashizolo e-BOSENSA athunyelwa kuwo wonke umhlaba, enziwe ngobuciko obuhle. Sine ukulawula esiqinile phezu izinto zokusetshenziswa. Ochwepheshe bethu bahlala bethuthukisa imikhiqizo yethu.
Ifektri yaseBosenda isendaweni yedolobha yokukhiqiza izinto zokwakha eChina, lapho ukukhiqizwa kwamashizolo, izingcezu zokubhola namasaha emigodi njll kunezinzuzo eziphelele ezweni lonke. Ubungcweti bethu bokusebenza kanye nokuphishekela kwethu ubuhle bomkhiqizo kwenza ubuchwepheshe bethu bokukhiqiza itshizili buhlale bukhulile futhi buqhubeke bumncintiswano emakethe yamathuluzi.
Uchungechunge lwama-chisels lutholakala kabanzi emakethe yamazwe omhlaba, ibhizinisi liyaqhubeka, amakhasimende ethu avela emazweni amaningi emhlabeni jikelele, avela eNyakatho naseNingizimu Melika, emazweni e-EU, emazweni e-East Eu, e-Est Asia naseMiddle East. Sizoqhubeka nokusebenzisa ubuchwepheshe bethu obuvuthiwe ukukhiqiza imikhiqizo engcono ukuhlangabezana nezidingo zemakethe.
IBOSENDA Electric Hammer Chisel / Chisel, enezinto ezingama-40Cr nensimbi yensimbi, i-40CR ihlala isikhathi eside ekusetshenzisweni, efanelekile ngezindonga zezitini, izindonga zikasimende, amakhonkethi namatshe. Izibambo ziyi-MAX shank, i-SDS shank, i-Hex shank, i-chisel yomoya kanye ne-65A yesandla nokunye, zonke ezinamashizolo acijile, athe xaxa futhi enweba. Iphakheji imvamisa ishubhu lepulasitiki, izidingo ezithile zingenziwa ngezifiso ngokufunwa kwamakhasimende.
Senza i-OEM ne-ODM, ukupakisha kungenziwa ngezifiso.
IBOSENDA Chisels ifaka ukumelana okuqinile, okuhlala isikhathi eside ekusebenzeni kwempilo, izinto ezifanelekayo ezenza ubulukhuni besosel buza phambili kwamashizolo amaningi emakethe.
Ama-chisel angasetshenziswa emigodini esezindongeni zikakhonkolo nezitini, ukusika nokugunda. Sinikezela ngochungechunge oluphelele lwezinhlobo ezahlukahlukene ezifana ne-chisel ekhonjiwe, ishizeli elincane eliyisicaba, ishizeli enkulu eyisicaba, ishizili eliyisiyingi, isisihi esibukhali somsele, njll.
Ubude be-chisel bunganqunywa ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ngemininingwane engaphezulu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Langaphambilini I-Woodworking drill ezintathu ezicijile, i-woodworking drill, i-woodworking hole opener, zonke izinhlobo zokubhola
Olandelayo: Diamond ukusika blade, idayimane isaha blade, Ceramic tile tile ukusika blade, zemabula ahlabayo blade, lenyengane ukusika blade, isaha blade
Ngokhuni imbobo imbobo sokuprakthiza, Izinkuni sokuprakthiza kancane, W ...
Ukwakhiwa kwe-drill bit, i-multi-functional alloy ...
Ithiphu Thepha, i-Chip Groove Tap, Umshini Oqondile Womtshingo ...